I-china hot sale enhle kakhulu amanzi angaxoshwa kumama izikhwama zokulala zabazingeli bezempi ifektri abakhiqizi | Xueruisha
Outdoor ezemidlalo anemibala umama isikhwama sokulala ukuthi kungaba b ...
Ukuthungwa kwemibala emibili isikhwama sokulala semvilophi esingajwayelekile ...
Imvilophu Eyodwa Isikhwama Sokulala Esine-Solid Co ...
Sifihle igobolondo manzi rip-stop milita ephathekayo ...
Hot ukudayiswa kakhulu amanzi oxosha umoya mummy s ...
2020 nomkhiqizi ephakeme 90% phansi ukulala wagcwalisa ...
2019 ifektri ebusika omdala ongaphandle amatende idada / ihansi ...
2019 okusha design nomkhiqizi ukukhanya okunethezeka comfortabl ...
Ukuthengisa okushisayo kakhulu izikhwama zokulala zomama ezingangeni umoya ezingangeni kubazingeli bezempi
Lezi zikhwama zokulala ezifihliwe zedijithali zenzelwe ngokukhethekile amasosha, abahloli bamazwe, abazingeli kanye nalabo abangabalandeli bezempi. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zemibala yezinketho, ezingafaneleka ezindaweni eziningi ezahlukahlukene, njengehlathi, zasendle, izintaba njll. Lezi zenziwe ngezindwangu zeNylon ezingama-20D 380T, ezingangeni umoya, amanzi oxosha amanzi, ama-rip-stop, afudumele kakhulu nokunye ukusebenza okuhle kakhulu.
Lezi zikhwama zokulala ezifihliwe zedijithali zenzelwe ngokukhethekile amasosha, abahloli bamazwe, abazingeli kanye nalabo abangabalandeli bezempi. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zemibala yezinketho, ezingafaneleka ezindaweni eziningi ezahlukahlukene, njengehlathi, zasendle, izintaba njll. Lezi zenziwe ngezindwangu zeNylon ezingama-20D 380T, ezingangeni umoya, amanzi oxosha amanzi, ama-rip-stop, afudumele kakhulu nokunye ukusebenza okuhle kakhulu. Njengoba sonke saziwa, ngokujwayelekile, indawo yokuzijabulisa yangaphandle iyabanda futhi imanzi, ngakho-ke kubalulekile ukuthi indwangu yegobolondo icutshungulwe ukwelashwa kwe-DWR (Durable Water Repellent), okungavikela isikhwama sakho sokulala kumswakama kakhulu. Singakwazi ukwenza ngokwezifiso imibala, izinto zokwakha, izitayela, usayizi njll, ngokusho kwesicelo sakho. Lesi sikhwama sokulala sigcwele i-1200g 90% yedada phansi, amafektri amaningi asebenzisa i-85% yedada phansi noma i-80% idada phansi, ingaba ngaphansi kwe-80%, kepha siphikelela ekusebenziseni i-90% duck phansi nge-Fill Power ephezulu ye-650+, kungayenza ifudumale kakhulu ngisho nasezindaweni ezibandayo. Njengamanje, amazwe amaningi aseYurophu naseNyakatho Melika asayine izinkontileka nathi, esimema ukuthi sizosiza ekukhiqizeni izimpi. Izidingo eziqinile zamasosha emikhiqizweni zifakazela ukuthi sinamandla owanele obuchwepheshe, sisebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokugcwalisa izinto nezindwangu ezahlukahlukene ezisezingeni eliphakeme. Ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo, uma unezidingo zokusetshenziswa kwezikhwama zokulala endaweni efanelekile, nakanjani singasifeza isicelo sakho. Siyazi ngokujulile ukuthi amakhasimende ahlukene anezidingo ezahlukahlukene, futhi sizozama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nezidingo zakho. Singakwazi ukuhlinzeka zonke izinhlobo zezinsizakalo ze-OEM ne-ODM kuwe nakumakhasimende akho, ngenxa yenkampani yethu enesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-20 kule mboni. Ukukhuluma iqiniso, siyazi ukuthi yini oyifunayo futhi siyenza yenzeke.
Ungayikhetha kanjani isikhwama sokulala?
1. Khetha izikhwama zokulala ngokuya ngesimo sakho: izikhwama zokulala ezincane kakhulu ziyoqina kakhulu ukuba zingaphenduka futhi zingakhululeki; izikhwama zokulala ezinkulu kakhulu zizothinta ukugcinwa kwemfudumalo uma zingenalutho.
2. Naka isikali sokushisa kwesikhwama sokulala: ngaso sonke isikhathi, idatha ebaluleke kakhulu yokukhethwa kwesikhwama sokulala yisikali sokushisa. Isikali sethempelesha sehlukaniswe ngemininingwane emithathu: umkhawulo wesilinganiso sokushisa (okungukuthi, isilinganiso sokushisa esiphansi kunazo zonke, kusetshenziswa ibha lokushisa eliluhlaza okwesibhakabhaka), isikali sokushisa esiduduzayo (lesi sikali sokushisa siphinde sihlukaniswe saba yizikali zokushisa eziphakeme neziphansi zabanye abakhiqizi, besebenzisa okuluhlaza okwesibhakabhaka kuya kolintshi ibha lokushisa), nesilinganiso sokushisa esiphezulu (kusetshenziswa ibha lokushisa elibomvu).
Langaphambilini Umkhiqizi we-2020 ophakeme u-90% izikhwama zokulala ezigcwalisiwe ngenani lokuncintisana
Olandelayo: Sifihle igobolondo elingangeni manzi isikhwama sokulala samasosha sokulala sezulu esibanda kakhulu
Isikhwama sokulala somama esinemibala sangaphandle esinemibala ...
2021 egqamile umbala phansi wagcwalisa mummy sle ...